Fampiharana tena tsara ho an'ny fametrahana ISO, NRG, IMG, BIN, NDF, DMG | Avy amin'ny Linux
Fampiharana tena tsara ho an'ny fametrahana ISO, NRG, IMG, BIN, NDF, DMG
Mikaroka Internet aho nahita fampiharana tsara antsoina AcetoneISO izay mamela antsika mitaingina iso, nrg, img, ndf y dmg miaraka amin'ny tsindry vitsivitsy. Tsy mila ado intsony ny programa.
1 Ubuntu sy Debian
Ubuntu sy Debian
Sintomy ny fisie arakaraka ny andiam-bokinao, ohatra, ny Fedora 18 AcetoneISO2-2.3-4.fc18 Ao amin'ny pejy manaraka izay milaza hoe RPM dia ampidininay izay mety indrindra aminay AcetoneISO2-2.3-4.fc18.x86_64.rpm satria 64 bit ny rafitra misy ahy.
Mba hanaovana ny fametrahana dia ataontsika izao manaraka izao
Manantena aho fa nanompo anao 😉 Mirary soa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fampiharana tena tsara ho an'ny fametrahana ISO, NRG, IMG, BIN, NDF, DMG
Mahaliana. Tsy mpampiasa isos be aho (na endrika hafa) afa-tsy ny fandoroana azy ireo amin'ny cd, fa ho raisiko izany 😉
Salama, ahoana no nametrahanao ny sary famantarana ny tontolon'ny birao ampiasainao?
xD dia nanambara izany fahafaha-manao izany taloha kelin'izay
Salama Jonathan, eto (https://blog.desdelinux.net/desdelinux-tambien-te-muestra-el-entorno-de-escritorio-que-usas-en-tus-comentarios/) eo no nilazan'izy ireo fa azo apetraka, nametraka rohy ihany koa izy ireo amin'ny fomba fanovana ny maso-draharaha mpampiasa. Raha sanatria eto dia avelako ny ahy:
Misaotra anao indrindra!!!!!!!
voynich dia hoy izy:
Salama, misaotra anao amin'ity lahatsoratra ity, na dia tsy dia nanampy ahy firy aza izy io.
Azafady azavaiko, nitafa rakitra .dmg fotsiny aho (taranja horonan-tsary) ary tsy afaka manokatra azy aho, ary hoy ity lahatsoratra ity, miaraka amin'ity programa ity, ny acetoneiso dia afaka manokatra ireo karazan-drakitra ireo, dieny izao rehefa manokatra ny programa ianao, I Manome ny safidy ny fanokafana fisie maromaro, fa tsy ireo voafintina ao anaty dmg! tsy nisy, nanandrana hatrany aho, ary tsy nisy mihitsy!
Ka azafady, mba misy manana vahaolana hanelanelanana an'izany ve? Angamba tsy haiko ny mampiasa an'ity programa ity, na zavatra tsy fantatro? koa maninona, ahoana no ahafahako manokatra rakitra voasiaka ao amin'ny .dmg, miaraka amin'ny acetoneiso?
Misaotra betsaka mialoha amin'ny fanampianao!
Mamaly an'i voynich
Fampiharana fanta-daza izay mandresy fandresena lol. Efa ela no nampiasako azy ary hatramin'izao dia mbola tsy nandiso ahy io
Tena nilaina ny programa, nampiasaiko betsaka izy io.
Valio i Dae
Nampiasako izany ary tena tsara. Azonao atao ihany koa ny mamerina ny cd voadona sy tsy azo ampiasaina tanteraka ary ampitaina amin'ny iso ny data tahiry ary avy eo maro ny data azo averina. Fitaovana tsara hanarenana angona.
salama inona no ataonao, mampiseho ny manodidina anao sa inona no ataonao?
Mampiasa Windows ianao amin'ny kde azonao atao ny mampakatra pikantsary hahitana ny endriny
Ny UA ihany no nilalaovako
Ratsy loatra aminao.
Ho an'ny slackware:
# lftp -c «misokatra http://www.slackware.org.uk/slacky/slackware-14.0/multimedia/acetoneiso/; mirror build »
# lftp -c «misokatra http://repository.slacky.eu/slackware-14.0/multimedia/acetoneiso/; mirror build »
# cd manangana /
Avela ihany koa ve ny "manova" iso amin'ny alàlan'ny fampidirana rakitra ao aminy, ohatra: amin'ny iso Debian hanampiana firmwares?
Izany no anontaniako ny tenako, izany ve no tena ilana azy indrindra.
Isomaster mety afaka manompo anao
Aleoko ny loop -o loop ho an'ny isos. Mbola misy manao sary ao amin'ny mpg ve? Vonjeo Andriamanitra.
Ho antsika izay nampiasa Alkoholika tao Windows dia safidy tsara hafa io.
Mahafinaritra ny miakatra amin'ny tsipika baiko fa milamina.
Mampiasa programa hafa aho izay afaka mametaka ireo isosa voaisy encrypt.
miarahaba anao Ariki
Tena ilaina ary efa nametraka azy aho, misaotra betsaka ... sudo pacman -S acetoneiso2
Data tsara, arahaba.
AMLC dia hoy izy:
Misaotra indrindra anao. Tsy fantatro hoe nisy izany.
Valiny amin'ny AMLC
Nanampy ahy izany! Misaotra indrindra anao!
Ao amin'ny Fedora 22 apetaho tsy misy olana… Ao amin'ny Fedora 23 tsy misy fomba, misy sosokevitra ve?
Misy soso-kevitra hametrahana azy ao amin'ny Fedora 23?
Safidy ahazoana mozika amin'ny fisintomana mivantana
Sony dia handefa smartphone miaraka amin'ny rafitra fiasa Firefox